Pakistana : “Oscar” Iray Ao Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2012 1:30 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Français, Italiano, বাংলা, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy ela akory izay, Sharmeen Obaid Chinoy, mpanao gazety iray mizaka zom-pirenena Kanadiana sy Pakistane sady mpamokatra horonantsary fanadihadiana no nahazo ny loka “Oscar” momba ny horonantsary (fohy) fanadihadiana tsara indrindra. Ny taona 2010, dia nahazo “Emmy” tamin'ny fanadihadiana nataony izy, ilay hoe Pakistana : Ny Zanaky ny Talibana.
Saika ny gazety rehetra mpiseho isan'andro ao Pakistana no nanao azy io ho lohateny lehibe (The News, Dawn, Jang , Express News). Ny Praiministra ao Pakistana koa dia nanambara ny fankasitrahana fara-tampony avy amin'ny sivily hoan'i Ramatoakely Chinoy.
Fandraisana an'i Sharmeen Obaid Chinoy tao amin'ny TEDxKarachi 2011. Sary nampindramin'i Dr Awab Alvi..
Nahatonga bitsika nirarakompana maro io vaovao io. Shermeen, mpandraharaha miasa tena sady talem-pamokarana horonan-tsarimihetsika, no noarahabain'ny olona rehetra :
‏@Jemima_Khan : Efa nolazaina anao, nolazaina anao, nolazaina anao fa taonan'i Pakistana ity taona ity…Miarahaba an'i @sharmeenochinoy tamin'ny nahazoany “Oscar” momba ny horonantsary fanadihadiany, Saving Face
@suhasinih : Waouh! Aonz'i Sharmeen Obaid Chinoy ny fanadihadiana tsara indrindra!! Nahita ireo anakandriamaso nirehitra afo aho…mila hitan'izao tontolo izao ny asany.
@Natasha_H_Ejaz: #Sharmeen Obaid-Chinoy : Mampilatsaka ny ranomasoko ianao ! Tena mirehareha aho!
@samramuslim : Mamindra toy ny #Pakistane feno fireharehana aho ankehitriny noho ny aminao @sharmeenochinoy sy ny #Oscar izay azonao !!
@Kamran Javed : ARAHABAINA ! Pakistana dia nahazo ny “Prix Oscar” voalohany tamin'ilay “Saving Faces” izay voafidy ho Fanadihadiana Tsara indrindra
Sharmeen Obaid Chinoy dia notolorana Oscar noho ny horonantsary fanadihadiana lalina nataony momba ny fiantraikan'ny herisetra nahazo ny vehivavy tamin'ny fampiasàna asidra. Ilay fanadihadiany dia mifantoka ihany koa amin'ny haratsin'ny fepetra iainan'ireo vehivavy ao Pakistana. Ilay horonantsariny Saving Faces (na Manavotra Ny Tava) dia mampiseho ny fomba fiainan'ireo vehivavy taorian'ny fahavoazany tami'ny asidra. Asehon'ilay horonantsary ihany koa ny asan'ilay mpitsabo mpandidy Pakistane-Britanika Muhammed Jawad izay nanao izay ho afany hanasitranana ny tarehin'ireo vehivavy niharan'ny fampijaliana ireo. Ny Fandorana amin'ny Asidra dia ‘herisetra ann-tokantrano’ ao Pakistana, ary fampiharana diso ny didim-pitsarana raha toa ireo mpanao ratsy tahaka izany ka afaka ny handositra ny fifehezan'ny lalàna.
Ilay vohikalan'ilay fanadihadiana dia manome antsipirihany ny tanjon'ilay horonantsary. Ny tena tanjona dia ny hampiatoana tanteraka ny herisetra amin'ny asidra ao Pakistana, fa tsy hoe “fampisehoana herisetra mahatsiravina” fotsiny ihany. Ilay ‘Acid Survivor Pakistan‘ na ireo Sisam-patin'ny Fandoroana Tamin'ny Asidra Tao Pakistana – Fikambanana iray mafana fo natsangana taorian'ny nahazoan'ilay horonantsary ny “Oscar” – dia nanao fandaminana hampiasa ny filazam-baovao sosialy, fanentanana, ny fampianarana ny tanora , sy ny fanentanana amin'ny onja-peo / fahitalavitra mba hanairana ny fahatongavan-tsain'ny olona mikasika io herisetra mahatsiravina io sy ny analàna azy io tanteraka ao amin'ny fiarahamonina.
Aaminah Qadir tao amin'ny bilaoginy, dia miantso mivantana an'i Sharmeen tamin'ny hoe modely fakàna aingam-panahy. Ilay Fankasitrahana dia hanampy ihany koa amin'ny fampandrosoana ny fomba fijery an'i Pakistana. Sharmeen, izy tenany, dia nanolotra ilay “Oscar” ho an'ireo vehivavy rehetra ao Pakistana. Hatramin'ny nananan'i Pakistana vehivavy tahaka an'i Shermeen, dia misy indray ny fanantenana amin'ny hisian'ny fiovana ao amin'ny fiarahamonina.
Ary farany, io lahatsary fanadihadiana io dia hanampy hampanàja sy hampametraka ny Fanarahamaso ny Asidra sy ny Lalàna Fisorohana ny Herisetra amin'ny Asidra navoaka ny volana Desambra 2011. Ilay fanitsiana vaovao dia hitondra ny mpanao ratsy ho amin'ny fanagadrana mandra-pahafaty, ary fanomezana onitra 1 tapitrisa ropia (11.000 $; taha tamin'ny 29 Febroary 2012).
Ny hafatr'i Sharmeen tao amin'ny Kamera Fisaorana tamin'ilay Oscar dia ny hoe :
Ho an'ny olona rehetra ao Pakistana, izay miady amin'ny fampihorohoroana isan'andro, ho anareo ity